4 Inoshamisa Inyanzvi yekuMicrosoft Courses & Certification - ITS Training
4 Inoshamisa Inodzidzira Dzidzo & Chidziro muMicrosoft
2. Microsoft Active Directory sevices ne windows server 2012R2
3. Nhanganyaya ku Microsoft Office 365
Office 365 ye IT Pros
Kutanga neHofisi 365
Kutaura neHofisi 365
4. Kutanga nekugadzirisa Microsoft SCOM 2012
Iyi Advanced Microsoft Excel 2013 mirayiridzo inotarisirwa kuti isarudze matanho anokosha ekushandisa mabheji akasiyana-siyana, kuongorora uye kuparadzanisa ruzivo rwemashizha evashandi, shandisa majekiti emashoko, sangano pamwe nevamwe, uye uite uye utarisire macros.
Iyi dzidzo yakarongerwa kune vanhu vasina maturo avo vane pakati pemugwagwa mano ane Microsoft Excel 2013 avo vanoda kutora mafungiro akawanda kana kudzivirirwa avo vanoda kutora mumitambo yakagadzirirwa mune iri dzidzo muIndaneti ye 2013.
Zvichizopedzisa kupedzisa dzidzo iyi, maitiro achave nekukwanisa:
Itai matanho ekuchinja uye mifananidzo.
Tevera pfungwa dzekutarisa uye mapadhi.
Shandura pane zvinyorwa uye kubvuma uye kusimbisa mashoko.
Sangano pamwe nevamwe nekuwana mabhizimisi uye mabhuku ekudzidzisa.
Ita, kushandisa, kuchinja, uye kutarisira macros.
Tenga uye tumira mashoko.
Tora Maoko pahutungamiri uye shanda pakugadzirisa Active Directory kufambira mberi muWindows Server 2012 neWindows Server 2012 R2 mune iyi 5-Day Course yeOnternet Course. Iwe uchatora maitiro aunofanirwa kuti uwedzere kutarisira uye uchengetedze ruzivo kusvika kune uye data, kugadzirisa sangano uye kutungamirirwa kwehutano hwehutano hwako, uye kupa ruzivo rwakachengeteka rwekuziva. Iwe uchadzidza kugadzirisa chikamu chezvinhu zvinokosha mu Active Directory, semuenzaniso, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, Dynamic Access Control (DAC), Work Folders, Work Place Join, Certificate Services, Rights Management Services (RMS), Federation Services, uye kuwedzera kugoverana kwako paunenge uchitaura nezvakatipoteredza nemakore akachengetedza zvinyorwa, somuenzaniso, Windows Azure Active Directory. Sezvimwe zvikamu zvekudzidza, unozoita maoko-pane mabasa mumusangano webasa.
Iyi dzidzo inotarisirwa kune Information Technology (IT) Vashandi vane Active Directory Domain Services (AD DS) vanosangana uye vari kutarisa kune imwe nzira yega yega inowedzera kuumba kudzidza nekukwanisa kushandisa kuwanikwa nekuchengetedzwa kwemashoko muWindows Server 2012 uye Windows Server 2012 R2. Izvi zvinowanzosanganisira:
Kugadziriswa DS Vatongi vari kutarisira kuwedzera maitiro mukati mekufambira mberi kwekuwaneka nekuchengetedzwa kwemashoko neWindows Server 2012 uye Windows Server 2012 R2.
Chimiro kana vashandi vezvivako zvehupfumi uye vane ruzivo rweD AD DS ruzivo uye ruzivo ivokikig kuwedzera pane ruzivo rwepfungwa uye nekudzidzisa zvakadzika mukuderedza zvakananga Active Directory kufambira mberi muWindows Server 2012 uye Windows Server 2012 R2.
ICHI VANHU Vakatora 10967A: Zvimwe zvinokosha zveWindows Server Infrastructure uye vanotarisira kuwedzera pane iyo Active registry information.
Kunyatsonzwisisa zvinogadziriswa zvehutungamiri hwehutano uye kuva nekwanisi yekugadzirisa mamiriro ezvinhu ane mhinduro dzakakodzera.
Taura uye utonge AD DS muWindows Server 2012.
Secure AD DS kutumira.
Ita DD DS nzvimbo, kuronga uye kutarisira kudzokorora
Dzorera uye utarisire Gwaro Rekuita
Chengetedza vateereri maitiro ne Group Policy
Dzorera simba rekusimbisa (CA) chain of command ne AD CS uye kutarisira ma CA.
Ita, ita uye kutarisira zviziviso.
Dzorera uye utarisire AD RMS.
Dzorera uye utonge AD FS.
Yakachengeteka uye urongwa ruzivo runosvika pakushandisa kufambira mberi, somuenzaniso, Dynamic Access Control, Work Folders uye Workplace Join
Svondo, tsvakurudza uye kugadzirisa kubatana kwebhizimisi kune AD DS masangano.
Gadzirai uye gadzirisa Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS).
Office 365 Zvinotarisirwa zvinotarisa zvivako zvehofisi yeHofisi 365 uye chikamu chinosimbiswa cheII Professionals. Microsoft Office 365 inoenderana nemakore ekufambisa kwegore uye kushandiswa kwezvinodiwa kwezvinodiwa. Dzidzo inotanga nekuongorora Office 365 engineering kubva pane zvakarongeka yeI Professional Professional, zvino inotora kunyadziswa kuburikidza nokuendesa Office 365 uye kupedzisa nekubvisa kuchinja kune zvidzidzo uye zvekutonga.
Office 365 inopa mikana inowanikwa nevatengi vachibvumira IT kuti irambe iri kutonga. Izvo zvingaita, shanduko iyi inoda kuti IT Inofanirwa kugadzirisa tsika dzavo dzekambani dzevashandi dzekambani yekugadzirisa nguva. Munzira iyi, IT Pros ichaona kuti zvikamu zvitsva zvinouya sei kuHofisi 365 kutanga, tsvaga pamusoro pezvigadziri zvitsva uye nzira dzekutamira panzvimbo dzebasa kumabasa kuhofisi ye365, uye uronga hutsva hutsva hunoshanda hweIt Pros.
Iyi Office 365 inokosha yekudzidzisa maitiro anoziva vadzidzisi veTI nepamatunhu makuru ehofisi yeHofisi 365 iyo inopa simba rehupfumi hwekukura nekuzadzika kwekwanisi.
Iyi purogiramu inoratidza kufarira kweMicrosoft inotarisirwa kutumira nzira yeHofisi 365. Kutaura gore kushandiswa hakusi zvachose sangano rinoshandiswa nevashandi vesangano rinowedzera uye inoda mano matsva uye nzira. Nehofisi 365, IT mahofisi anogona kukurumidza kusimuka nekumhanya nemutyairi uye kuenderera kuchizvarwa nekurongeka kwakakwana kwekwanisi. Tsvaga nezvekutumira nzira, mazano nemabasa anoshandiswa kugadzirisa kutanga kweHofisi yako 365.
Iyi Office 365 inokosha zvikamu zvepurogiramu dzechido chekugadzirisa nekufungisisa paunenge uchikura piyona yeHofisi 365 yemamiriro ekugadzirira.
Iyi sangano rinotarisa paHofisi 365 Service Communications rhythm. Sezvo unofanirwa ne-profit mode, kuchengetedza mapepa emakambani pakati pevadzidzisi veTI neHofisi 365 boka rinokosha. Ratidza kuti Office 365 inoshandiswa sei kugadzirisa, kugadzirisa, kuronga kutsigirwa, uye hutano hwehutano hunobudiswa uye kuti ungabatana sei naMicrosoft.
Iyi Office 365 inokosha musangano wekudzidzisa unoratidza kuti Microsoft inotora sei kuvandudzwa uye kutarisira kuchinja kuhofisi yeHofisi 365 nekushanda munzvimbo yako.
Iyi yemazuva mashanu ezuva inopa maitiro ekudzidza uye maitiro ekutsvaga uye kugadzira System Center 2012 Operations Manager. Uyezve chikwata ichi chichagadzirisa kusavimbika kwekutarisana neChina chekushandisa kweChina Chekushandisa.
Iyi dzidzo yakarongerwa kune vadzidzisi veII neWatch Windows Server, Active Directory uye system setup uye kutarisana kusangana.
Mukupera kwekudzidzira dzidzo iyi, matambudziko achaita kuti:
Taurai Basa reMabasa Manager 2012 uye rongai pasi rose uye Management Server mamwe masarudzo.
Shandisa Mazivo eZviwanikwa zvepamusoro.
Tsvaga iyo Operations Manager Console uye Web Console.
Ita zvose zviri zviviri zvekombiyuta uye zvinyorwa zvinoshandiswa pakugadzirisa zviri pamusoro pehupfumi.
Tumira uye uende kutonga kwepakiti.
Ronga Mitemo, Zviitiko, Vatariri uye Mabasa.
Ronga Kuzivisa uye kuita mhinduro.
Zvishandiso zvemashini uye maseraji anoshandisa Agentless Monitoring uye Agentless Exception Monitoring.
Ronga uye uchengetedze Kuongororwa Kwebasa Rokuita.
Ita Shanduro Dzakasiyana.
Itai Mazano Okuparadzirwa.
Multi-home a specialist.
Saronga Gedhi reSango rekucherechedza mamiriro asina kukodzera.
Ronga magwaro pakati pehutungamiri bhuchi.
Tungamira kubva kumabasa ekugadzirisa 2007 kuenda kune 2012 Operations Manager.
Apple CEO Tim Cook anounganidza $ 198 mamiriyoni mu2016, Ichokwadi
Google Inopedza Drone Program, Ndiyo Runyerekupe